पृथ्वीमा १३ सबैभन्दा घातक भाइरसहरू : “मारबर्गदेखि ओमिक्रोन सम्म” « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
काठमाडौँ । मानिसले प्रजातिहरुको आधुनिक रूपमा विकसित हुनु अगाडिदेखि नै भाइरससंग लडिरहेका छन् । केही भाइरल रोगहरूको लागि, खोपहरू र एन्टिभाइरल औषधिहरूले हामीलाई संक्रमणलाई व्यापक रूपमा फैलिनबाट जोगाउँदछ, र बिरामी व्यक्तिहरूलाई निको हुन मद्दत पुर्याउँदछ ।
धेरै भाइरसका औषधि उपचार सम्भव हुँदै गएका छन भने वर्तमान नोभल कोरोनाभाइरससँग विश्व अहिले जुधिरहेको छ । जसको कुनै औषधि निर्माण हुन सकेको छैन । यहाँ यस्तै १२ खतरनाक भाइरसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । सात अर्बका सपनाहरु, एउटा पृथ्वी र विभिन्न रोगबाट पुर्याएको अपुरणिय क्षति यस्ता छन् ।
१. मारबर्ग भाइरस
सन् १९६७ मा वैज्ञानिकहरूले मारबर्ग भाइरसको पहिचान गरे, जब युगान्डाबाट ल्याइएका बाँदरहरुको प्रयोगशालामा काम गर्ने मजदुरहरूको बीचमा सानो प्रकोप देखा पर्यो ।
मारबर्ग भाइरस इबोलासँग मिल्दोजुल्दो छ, दुबैले हेमोर्याजिक ज्वरो निम्त्याउन सक्छ । यसको मतलब संक्रमित व्यक्तिहरूमा उच्च ज्वरो गराउँछ र रक्तस्राव बढाउँछ । जसले आघात, अंग विफलता र मृत्यु निम्त्याउन सक्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ९डब्ल्यूएचओ० का अनुसार पहिलो प्रकोपमा मृत्यु दर २५ प्रतिशत थियो तर सन् १९९८(२००० मा कंगोमा ८० प्रतिशतमा पुग्यो, साथसाथै २००५ मा अंगोलामा पनि ।
२. इबोला भाइरस
रिपब्लिक सुडान र डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंगोबाट सन् १९७६ मा इबोलाको प्रकोप देखियो ।
इबोला भाइरस विज्ञ र बोस्टन विश्वविद्यालयको माइक्रोबायोलॉजीका सहयोगी प्राध्यापक, एल्के मुहल्बर्गरले लाइभ साइन्सलाई भनेका छन्— इबोला रगत वा शरीरको अन्य तरल पदार्थहरू, वा संक्रमित व्यक्ति वा जनावरहरूबाट टिशूको सम्पर्कको माध्यमबाट फैलिन्छ ।
यो प्रकोपले पश्चिम अफ्रिकामा सन २०१४ को सुरुवातामा सताएको थियो । डब्लूएचओका अनुसार सो समयमा प्रकोप नियन्त्रण गर्न धेरै कठिन थियो ।
रेबिजको भ्याक्सिन सन् १९२० मा आएपछि यो भाइरस नियन्त्रणमा आयो । रेबिज भाइरसले भारत र अफ्रिकाका केही भागमा नमज्जाले सताएको थियो ।
रेबिजले दिमाग विनाश गर्ने र यदी उपचार नगरिए सतप्रतिशत मृत्यु हुने गर्दछ ।
यो आधुनिक समयमा अर्को प्राणघातक रोग बनेको छ एचआइभी अर्थात एड्स । यो रोगबाट अनुमानित ३२ मिलियनको मृत्यु भएको छ । सन् १९८० मा यो रोग पहिचानमा आएको थियो ।
सन् १९८० मा वर्ल्ड हेल्थ एसेम्ब्लीले यो रोगको घोषणा गरेको थियो ।
यो रोगको ३ संक्रमित मध्ये १ को ज्यान गयो । यसले बचेकाहरूलाई गहिरो, स्थायी निशानहरू र, प्रायः अन्धोपना बनाइदिन्छ । २० औँ शताब्दिमा मात्र यो रोगका कारण ३०० मिलियन मानिसको मृत्यु भएको थियो ।
हान्टाभाइरस पलमनरी सिन्ड्रोम ९एचपीएस०, अमेरिकाबाट सन् १९३३ मा छरिएको थियो । यो रोगका कारण ६०० मा ३६ प्रतिशतको मृत्यु भएको थियो । यो भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्कोमा संक्रमित हुँदैन, बरु मानिसहरुमा संक्रमित मुसाबाट सर्ने गर्दछ ।
यो भाइरसको अनेक रुप सन् १९५० को सुरुवातमा ३००० जनामा थियो, जसमा १२ प्रतिशतको मृत्यु भएको थियो ।
यो रोगबाट ५ लाख भन्दा बढी मानिसहरुको मृत्यु भएको अनुमान छ । डब्लूएचओका अनुसार, यो रोग जब देखापर्यो ह्वात्तै मृत्युदर बढायो ।
इन्फ्लूएन्जा सन् १९१८बाट सुरु भएको थियो जसलाई स्पेनिश फ्लू पनि भनिन्छ । विश्वको जनसँख्याको ४० प्रतिशत विरामी भएको र ५० मिलियनको मृत्यु भएको अनुमान छ ।
मानव समुदायबाटै जन्मिएको र एकअर्कामा सजिलै सर्न सक्ने यो रोगले सो समयमा ठूलो समस्या निम्त्याएको जानकारहरुको दावी छ ।
डेंगू सबैभन्दा पहिले सन् १९५० मा फिलिपिन्स र थाइल्याण्डमा देखा परेको थियो । त्यसपछि क्रमशः फैलिएर विश्वव्यापी भएको थियो ।
डब्लूएचओले प्रत्येक वर्ष यो रोगका विरामीहरु करिब ५० देखि १०० मिलियन हुने बताएको छ । लामखुट्टेको कारण लाग्ने यो रोगले जनसँख्याको २० प्रतिशतको रोग निको हुँदैन ।
बच्चाहरुलाई जोगाउनका लागि रोटाभाइरसका अहिले दुइवटा भ्याक्सिनहरु उपलब्ध छन् । यो एकप्रकारको डायरिया नै हो, विस्तारै फैलँदै जाने हुन्छ ।
यो भाइरसका कारण विकसित मुलुकमा बच्चाको मृत्यु झुक्किएर मात्र हुन्छ तर विकासोन्मुख देशको यो ठूलो समस्या हो ।डब्लूएचओका अनुसार सन् २००८ मा विश्वमा ४५३,००० बच्चाहरु, ५ वर्षभन्दा कमकाको यही भाइरसकै कारण मृत्यु भएको थियो ।
डब्लुएचओका अनुसार, गम्भीर तीव्र श्वासन सिन्ड्रोम वा सार्सको कारण हुने भाइरस पहिलो पटक २००२ मा दक्षिणी चीनको गुआंग्डोंग प्रान्तमा देखा पर्यो ।
सुरुमा यो भाइरस चमेरामा देखा पर्यो र त्यसपछि मानवलाई संक्रमित गर्नुभन्दा पहिले सिभेट भनिने रातो स्तनपायी जन्तुमा लाग्यो । चीनमा प्रकोप शुरू भएपछि सार्स विश्वभरि २६ देशहरूमा फैलियो, ८००० भन्दा बढी मानिसहरूलाई संक्रमित गर्दैछ र दुई बर्षको अवधिमा ७७० भन्दा बढीको मृत्यु भयो ।
यो रोगको पनि अहिलेसम्म प्रमाणित उपचार र भ्याक्सिन छैन ।
सार्स(कोभ(२ भाइरसको उही ठूलो परिवारसँग सम्बन्धित छ, कोरोनाभाइरस भनेर चिनिन्छ, र पहिलो पटक डिसेम्बर २०१९ मा चिनियाँ शहर वुहानमा पहिचान गरियो । यो भाइरस सार्स(कोभ जस्तै थियो र मानिसहरूलाई संक्रमित गर्नु अघि मध्यवर्ती जनावरको माध्यमबाट सर्यो ।
आगमन पछि, भाइरसले चीनमा हजारौं र विश्वभरि हजारौं अन्य मानिसहरूलाई संक्रमित गरिसकेको छ । हालको प्रकोपले वुहान र वरपरका शहरहरूको व्यापक क्वारेन्टाइन, प्रभावित देशहरूमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने र निदान, उपचार र भ्याक्सिनहरू विकास गर्न विश्वव्यापी प्रयासलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।
यस रोगलाई सार्स-कोभ-२, कोभिड—१९ (coronavirus disease-2019) भनिन्छ, को अनुमानित मृत्यु दर लगभग २।३ प्रतिशत छ । ठूला व्यक्तिहरू वा अन्तर्निहित स्वास्थ्य अवस्था भएका व्यक्तिहरूलाई गम्भीर रोग वा जटिलताको खतरामा बढी देखिन्छ । सामान्य लक्षणहरूमा ज्वरो, सुख्खा खोकी र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, र यो रोग गम्भीर अवस्थामा निमोनियामा बढ्न सक्छ ।
अहिलेसम्म कोभिड–१९ बाट विश्वभरमा ३,८३१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । संक्रमितको संख्या १ लाख १० हजार नाघेको छ । यो प्रकोपले महामारीको रूप लिएको छ ।
मध्य पूर्व श्वासप्रश्वास सिन्ड्रोम, वा एमईआरएसको कारण हुने भाइरसले २०१२ मा साउदी अरेबिया र २०१५ मा दक्षिण कोरियामा अर्को प्रकोप देखायो । मार्स भाइरस, भाइरसको उही परिवारमा सार्स–कोभ र सार्स(कोभ(२ को सँग सम्बन्धित छ, र सम्भवतः चमेरामा उत्पत्ति भएको थियो । यो रोग मानिसमा प्रवेश गर्नु भन्दा पहिले ऊँटमा संक्रमित थियो र संक्रमित व्यक्तिहरूमा ज्वरो, खोकी र स्वासको समस्या गराउँछ ।
एमआरएस प्रायस् गम्भीर निमोनियालाई बढवा दिन्छ । यसको ३०५ र ४०५ को बीचमा अनुमानित मृत्युदर छ, जसले जनावरहरूबाट मानिसहरूमा उफ्रिने ज्ञात कोरोनाभाइरसलाई निम्त्याउँछ । सार्स कोभ र सार्स कोभ–२, मार्सको अनुमोदित उपचार वा भ्याक्सिन छैन ।
यो भेरियन्ट पहिलो पटक २०२२ नोभेम्बर २४ मा दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको थियो । नाइजेरिया र साउदी अरबमा पनि कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ फेला परेको छ । योसँगै हालसम्म २२ मुलुकमा ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलिएको छ । बुधबार नाइजेरियाको रोग नियन्त्रण केन्द्रले २ जनामा ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो । संक्रमित दुवै जना गत हप्ता दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका यात्रु रहेको केन्द्रको भनाइ छ ।
यस्तै साउदी अरबमा पनि एकजना कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ भेटिएको छ ।दक्षिण कोरियामा पनि ओमिक्रोनका संक्रमित फेला परेका छन् । त्यहाँको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम एजेन्सीका अनुसार हालै नाइजेरियाबाट दक्षिण कोरिया आएका एक दम्पत्तीमा ओमिक्रोन देखिएको हो । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार नयाँ भेरियन्ट फैलिएका मुलुकमध्ये युरोपमा १२ वटा छन् । युरोपमा बेलायतसहित अष्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, पोर्चुगल, स्पेन र स्विडेनमा ओमिक्रोन फेला परेको सीएनएनले जनाएको छ । बेलायतमा मात्रै ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या २२ पुगेको छ । सुरुमा पहिचान भएको दक्षिण अफ्रिकामा ओमिक्रोनका संक्रमित ७७ पुगेका छन् भने बोत्स्वानामा १९ जनालाई यो भेरियन्टले संक्रमण गरेको छ । क्यानाडामा समेत ३ जनामा ‍ओमिक्रोन पुष्टि भएको छ ।